Entrer votre adresse e-mail pour vous inscrire à ce blog et recevoir les notifications des nouveaux articles par courriel. Ahitana ny fitsikerana mivaivay an-dRavalomanana io lahatsary io ary azo jerena amin’ny teny malagasy ao amin’ny dailymotion. Sur le même thème. Voasambotra ve i Andry? Tafala teo amin’ny fitondrana Ratsiraka tamin’ny , nandritra ny fifidianana iray izay samy nilazan’ny roa tonta, izy sy Ravalomanana, izay Ben’ny tanàna tamin’izany fotoana izany, ho samy nandresy. Alefaso imailaka ny hevitra hafa mipoitra amin ity lahatsoratra ity. Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook.
Efa nalaza dia nalaza tokoa io daty io ka nahafantatra azy avokoa ny mpitolona sy ny mpitondra fanjakana. Ary izay tsy do teo dia nasaina nandavaka ny fasana handevenana azy. VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, bosc nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra: Araka ny vohikalan’ny Filohany tanjon’ny fanovana dia ny hanamafisana ny antoko politika ka ahafahany mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Alefaso imailaka ny hevitra hafa mipoitra amin ity lahatsoratra ity. Nihahenjana ary izany fifandraisana teo amin’ny filoha sy ny ben’ny tanàna izany, tamin’ny herinandro, raha nandefa ny revirevy sy ny rediredin-Ratsiraka Didier, filohan’i Madagasikara teo aloha, ny VIVA orinasan’ny Ben’ny tanàna, rehefa avy naseho nandritra ny fotoana maharitra ny sarin-dRatsiraka ofisialy tamin’ny naha-filoha radioo, Io fihetsika iray io dia notsikerain’ny sasany.
Hijery tantar Tenim-Pirenena rehetra? Voasambotra ve i Andry? Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana ny teny Faravohitra ka! Dia toy izany ary ny tantara teto Madagasikara!
Nandà izany ankitsirano ny governemanta ary mieritreritra i Zombia raha ninia nanaparitaka izany tsaho izany i Andry TGV. Alefaso imailaka ny hevitra hafa mipoitra amin ity lahatsoratra ity. Impossible de partager les articles de votre ddon par email.
Mila fanohanana avy amin’ny namana sy ny mpamaky toa anao ny fikambananay hitoerany ho tabtara, maimaim-poana, ary hahazaka miasa maharitra! Ny fandaharam-potoana tamin’io andron’ny 17 Desambra io dia ny hisian’ny fifanakalozana malalaka eo amin’ny samy mpilalao politika, ka hivoaka avy ao ny tolo-dalàna hanovana ny fitsipika mifehy ny antoko politika.
Nisy ve ny fifandonana? VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra: Laisser un commentaire Annuler la réponse Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana. Amin’izay hanihany izay ihany, Jentilisa nanao lohateny hoe:.
Mbola mitohy ny fampihenjana-tady. Tsara ny manamarika fa mpanohitra teo aloha? Tokony ho 30 eo ho eo moa ny antoko politika boaco tsy hanatrika. Izahay Takelaka fisoratana ho an’ireo mpandika teny Teny ierana. Sondrian-tory aho nony nisasaka ny alina.
Ary aza matahotra fa tsy maintsy ho lasa filoham-pirenena ingahy ka! Politique relative aux cookies. Nihahenjana ary izany fifandraisana teo amin’ny filoha sy ny bowco tanàna izany, tamin’ny herinandro, raha nandefa ny revirevy sy ny rediredin-Ratsiraka Didier, filohan’i Madagasikara teo aloha, ny VIVA orinasan’ny Ben’ny tanàna, rehefa avy naseho nandritra ny fotoana maharitra ny sarin-dRatsiraka ofisialy tamin’ny naha-filoha azy, Io fihetsika iray io dia notsikerain’ny sasany.
Ny leson’ny tantara tamin’izay nitranga ny alakamisy 19 febroary ! – [email protected] Miray
Raha tahaka an’i News2Dago sy Jentilisa avokoa moa ny boosco [ fa tsy voatery ho izany kosa aloha e! Envoyer à l’adresse email Votre nom Votre adresse e-mail. Nafana ihany koa ny resaka momba an-dRatsiraka ao amin’ny serasera. Telopolo taona mahery i Andry Rajoelina Ben’ny tanànan’Antananarivo, tompon’ny VIVA, sy tompona orinasa hafa manam-pahombiazana, tahaka ny Injet, orinasam-pifandraisana, sy ny Domapub, orinasan-dokambarotra iray misongadina tantanin’ny vadiny, Mialy Razakandisa, avy amin’ny fianakaviana malaza.
Nisy ve ny maty sy ny naratra? Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Ny mahatsikaiky anefa, dia nandritra io herinandro io ihany koa no nanomanan’ny governemanta ny fihaonam-ben’ny antoko politika malagasy rehetraka anisan’izany ihany koa ny mpanohitra.
Global Voices Amin’ny Teny Malagasy. Miandry ny andro hiposaka daholo vao mivaly izay rehetra mety ho fanontaniana manitikitika ny be sy ny maro. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Tantaram-pitiavana Iray Teny Amorondranomasina. Navoitran’ny fanambarana an-gazety ary fa:.
Faly aoka izany ny Malagasy fa hay azo resena soa amantsara ireto Frantsay nanjakazaka ireto. Raha hamaly ity hevitra ity. Tsy nisy fitaovam-piadiana maro azo akory manko tao.